BUDDHIST TERMS' Dictionary: FIVE HEINOUS DEEDS - ပဉ္စာနန္တရိယကမ္မ
FIVE HEINOUS DEEDS - ပဉ္စာနန္တရိယကမ္မ
FIVE HEINOUS DEEDS THAT SEND ONE TO NIRAYA Pancᾱnantariya kamma
ပဉ္စာနန္တရိယကမ္မ - ပဉ္စာနန္တရိယကံ၊ သေလွန်သည်နှင့် တပြိုင်နက် အခြားမဲ့ဘ၀၌ အပါယ်ငရဲသို့ မလွဲမသွေ ရောက်စေနိုင်သော အကုသိုလ်ကံ။
(၁) အမိကို သတ်ခြင်း၊
(၂) အဖကို သတ်ခြင်း၊
(၃) ရဟန္တာကို သတ်ခြင်း၊
(၄) ဘုရားရှင်အား သွေးစိမ်းတည်အောင် ပြုခြင်း၊
(၅) သံဃာ အသင်းခွဲခြင်း ဟူ၍ ငါးပါးရှိ၏။
The five heinous deeds that send one to the realm of continuous suffering immediately on the death of the perpetrator are:
1. Killing one’s mother,
2. Killing one’s father,
3. Killing an arahat,
4. Drawing blood on the person of the Buddha,
5. Causing schism in the Order of bhikkhus.